Madaxweyne Gaas: Hoggaamiyihii Daacishta Soomaaliya waa ka Badbaaday duqeyntii gobolka Bari[Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Gaas: Hoggaamiyihii Daacishta Soomaaliya waa ka Badbaaday duqeyntii gobolka Bari[Dhageyso]
GAROOWE – Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali(Gaas) ayaa markii u horeysay ka hadlay duqeyn diyaaradeed oo lala beegsaday horjoogihii Daacishta Soomaaliya ee ku sugan Buuralayda Cal-madow ee gobolka Bari.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Xog ay haleen hay’adaha amniga Puntland ku sheegay in uu ka badbaaday weerarka Hoggaamiyihii Daacish Cabdulqaadir Muumin.
Diyaarado ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa Jimcihii weerar ku qaaday Buuralayda gobolka Bari taasoo lala beegsaday Hoggaamiyaha Daacish Cabdulqaadir Muumin.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in Mareykanku uusan la qeybsan xogta weerarkaas iyo khasaaraha ka dhashay.
Dabcan Nimankan hadaysan bartilmaameed la yaqaan haysan kuma duqeeyaan halkaasi Alshabaab ama daacish ayaa joogta, nimanka halkaas jooga oo C/qaadir muumin ugu weynyahay ayuun bay raadinayeen, sida aan xogta ku helayana weli waa noolyahay oo ma dhiman”
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn soo dhaweeyey beegsiga lagu hayo kooxda Daacish ,wuxuu sidoo kale tilmaamay in Daacish ay tahay cadowga Ummada Soomaaliyeed loona baahan yahay in la iska kaashado dagaalka lagula jiro argagaxisada.